Wasaaradda Caddaaladda ee Shaqaale Qandaraasle qandaraas la siiyay | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Caddaaladda inay shaqaaleysiiso shaqaale qandaraas leh
Ogeysiiska soo iibsiga ee 50 shaqaale rayid ah ayaa la daabacay si loogu wareejiyo kunturaada qandaraaska la siinayo Wasaaradda Caddaaladda. Waxaa laga soo xigtey: Wasaaradda Caddaaladda 50 Shaqaale Dowladeed! KPSS 60 - Qorista Sarkaalka Qandaraasle qandaraas qaatay
Mabaadi'da 'Shaqaalaha Qandaraaslaha ulan oo ay meel mariyeen Golaha Wasiirku go'aankiisa oo ku taariikhaysan 657/4/06 isla markaana lagu tiriyey 06/1978, Qodobka 7 (B) ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee lambarka 15754 ee lagu shaqaaleynayo Agaasimaha Guud ee Agaasinka IT-ga ee Wasaaradda Cadaaladda. Sida ku xusan faqradda 2aad qodobka 8aad ee “Xaaladda Baaritaanka” iyo qodobbada Wasaaradda Cadaaladda ee Imtixaanaadka Shaqaalaha Rayidka ah, Ballamada iyo Xeerarka Kala-wareejinta, Dhibcaha 2018-KPSS (Group B), 5 jeer boosaska bannaan ee koox kasta. Musharrixiinta dhexdooda, shaqaalaha qandaraaska ku jira ayaa loo qori doonaa 50 boos oo Injineer ah oo meelaynaya la qabanayo iyada oo la raacayo guusha imtixaanka afka ah ee ay Wasaaraddeedu qabatay.
SHURUUDAHA I-DALBASHADA A-GUUD shuruudaha
a) 657 Sharciga No. Shaqaalaha Rayidka ah 48 Qodobka si loo buuxiyo shuruudaha,
b) 2018- Inaad ka qaadatay KPSS (B) kooxda imtixaanka iyo inaad ugu yaraan 3 dhibcood ka hesho nooca dhibcaha KPSSP60,
c) Si aad u qalin jabiso ugu yaraan heerka shahaadada koowaad. (qaybaha la xiriira ayaa hoos ku taxan)
Kooxda Codsiga Qeybta qalin jabisay Shaqaalaha
Kooxda 1 Java
barnaamijyada Injineernimada kumbuyuutarka
Ering Kombiyuutarka iyo Injineerka Software
Ering Injineerka Nidaamka kumbuyuutarrada
Ering Injineerka Nidaamka Macluumaadka
Ering Injineeriyada Korantada iyo Korontada
Ering Injineerka Elektaroonigga ah
Ering Injineerka Korantada iyo Isgaarsiinta
Ering Injineer Software 10
Kooxda 2 Imtixaan Software Injineernimada kumbuyuutarka
Ering Injineer Software
Ering Injineer warshad
Ering Warshadaha Warshadaha iyo Nidaamka
Engine Injineerka Xisaabaadka 3
3. Maareynta Xogta Kooxda Injineernimada kumbuyuutarka
Ering Injineer Software 4
Shabakadda 4aad iyo Nidaam
maamulka Injineernimada kumbuyuutarka
Engine Injineerka Xisaabaadka 8
5. Maareynta 'Pardus Team' Injineernimada kumbuyuutarka
Engine Injineerka Xisaabaadka
Ering Injineer Software 2
Maareynta Tamarta Engine Injineerinka Korantada
Ering Injineeriyada Korantada iyo Korontada 3
7. Group Audio iyo Video
nidaamyada Injineernimada kumbuyuutarka
Ering Injineer warshad 4
Amaanka Macluumaadka Injineernimada kumbuyuutarka
Engine Injineerka Macluumaadka ee Farshaxanka ah 7
9. Habka Tayada Kooxda
maamulka Ering Injineer warshad
Engine Injineerka Xisaabaadka 4
Engine Injineerka Macluumaadka ee Farshaxanka ah
Engine Injineerinka Korantada
Ering Injineerka Nidaamka Tamarta
10. Barnaamijka Grup.Net Injineernimada kumbuyuutarka
Ering Injineer Software 5
B-SHURUUDAHA GAARKA AH
1. Qalin jebinta afarta sano ee injineernimada kumbuyuutarka, kombiyuutarka iyo injineerinka, injineernimada kumbuyuutareedka, injineeriyada macluumaadka, injineerinka korontada, injineerinka korontada, elektaroonikada iyo isgaarsiinta ama waaxyada injineerinka soonaha kulliyadaha, ama wax u dhigma kuwan, machadyada tacliinta sare ee dibada. qabka
2. Si loo caddeeyo inuu / inay leeyahay ugu yaraan 6 bilood oo waayo-aragnimo xagga softiweeriyada ah, naqshadaynta softiweer iyo horumarin ah (illaa taariikhda dalabka),
3. Si loo caddeeyo in isaga / iyadu ay leeyihiin aqoon / khibrad si ay ugu horumariyaan codsiyada madal JAVA,
a. Si aad u hesho aqoon ku saabsan falanqaynta iyo jihaynta shayga,
b. Si aad u lahaato heerka aqoonta iyo heerka aasaasiga ah ee aqoonta SQL si loo horumariyo codsiyada leh xogta RDBMS,
c. Haysashada heerka aqoonta si loo xaqiijiyo mashruuc adoo adeegsanaya qalabyada ORM,
d. Si aad u hesho aqoon ku saabsan istiraatiijiyadda barnaamijyada leh barnaamijka 'Java Swing'
e. Aqoonta ugu yaraan mid ka mid ah aaladaha warbixinta (Style Report, Jasper Report, iwm.),
f. Aqoon u lahaashaha SOAP iyo naqshadeeyeyaasha Adeegga Websaydhka,
g. Si aad u hesho aqoon ku saabsan Qaab-dhismeedka Webka (Guga MVC, Struts, Vaadin, JSF iwm.),
1. Injineerada kumbuyuutarka ee afarta sano ah, injineerada kumbuyuutarrada iyo kumbuyuutarrada, injineernimada kumbuyuutareedka, injineernimada qalabka macluumaadka, injineerinka korontada, injineernimada elektarooniga, injineerinka iyo isgaarsiinta, injineernimada, injineernimada warshadaha, warshadaha iyo nidaamka injineernimada ama waaxaha injineeriyada xisaabta ee kulliyadaha. ka qalin-jabiyey machadyada tacliinta sare ee dibedda oo xaq u leh ay aqbaleen Golaha Tacliinta Sare,
2. Caddayn inaad leedahay ugu yaraan 10 sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan maareynta xog ururinta (sida taariikhda arjiga) ee Oracle 11g / 12g / 2c ama kaydka xogta xilligan ee la joogo iyo IBM DB8 Nooca 1 ama xogta noocyada hadda ah,
a. Si aad u hesho aqoon ku saabsan qaab dhismeedka macluumaadka, naqshadeynta iyo kobcinta,
b. Inaad yeelato aqoon SQL,
c. Si aad u hesho aqoon ku saabsan xogta PostgreSQL,
d. Haysashada aqoonta SQL
e. PL / SQL aqoontu ha lahaato.
1. Injineerka kumbuyuutarka ee afarta sano ah, injineerinka kombiyuutarka iyo kumbuyuutarka, injineernimada kumbuyuutareedka, injineernimada nidaamyada macluumaadka, injineerinka korontada, injineernimada korontada, elektarooniga iyo injineernimada isgaarsiinta ama softiweer.
Qalin jebinta waaxyada injineerinka ama machadyada tacliinta sare oo u qalmitaankiisu aqbalay Golaha Tacliinta Sare,
2. Si loo caddeeyo inuu isagu / iyadu leeyahay ugu yaraan hal sano oo khibrad ah xagga farsamooyinka imtixaanka kombiyuutarka iyo hababka (illaa taariikhda dalabka),
a. Si aad u lahaato heer aqoon si aad ugu horumariso codsiyada masraxa JAVA,
b. Si aad u hesho aqoon ku saabsan falanqaynta iyo jihaynta shayga,
c. Si aad u hesho aqoon ku saabsan xog-ururinta iyo barnaamij-sameynta heerka aasaasiga ah,
d. Si aad u hesho aqoon aasaasi ah oo SQL,
e. Si aad u hesho aqoon ku saabsan aragtida, waxqabadka, cabudhinta iyo tijaabada rarka,
f. Si aad u hesho aqoon ku saabsan Selenium, Cucumber, Qalabka silktest,
g. Awoodda lagu aqoonsado laguna xalliyo dhibaatooyinka.
1. Injineerka kumbuyuutarka ee afarta sano ah, Computer Va. Maareynta nidaamyada hawlgalka ee UNIX / AIX / LINUX ama kaydinta / gurmadka (diskka, cajalad, hanashada diskiga, SAN, iwm.),
b. Maamulka xog uruurinta ee nooca loo yaqaan 'IBM DB2' nooca nooca xogta 8 10 ama noocyada xogta Oracle ee noocyada XNUMXg post
c. Nidaamyada hawlgalka iyo maareyn ballaaran oo heer sare ah noocyadii dambe ee Microsoft Server 2012,
d. Maareynta shabakadaha macluumaadka (router iyo wareejinta) nidaam leh ugu yaraan 10.000 isticmaale gudaha ah,
a. Khibrad ku saabsan maareynta adeegayaasha bixiya adeegyada DHCP, DNS, IIS (Adeegyada Macluumaadka Internetka) ugu yaraan nidaamyada macluumaadka ballaaran,
b. In lagu caddeeyo barnaamijkastoo UNIX / AIX / LINUX OS,
c. Inaad haysato shahaadada MCSA ama MCSE ama aad ugu yaraan 2012 saacadood tabobarno barnaamijyada dambe ee Windows Server 50 ah,
d. Khibrad ku saabsan maareynta Virtualization Server Scale Server weyn (VMware ama Vi Hat Virtualization).
e. Shahaadada VMware iyo Shahaadada Kowaad ee Koofiyadda Cas,
f. Khibradda qoraalka Afka.
1. Injineerinka kombiyuutarka ee afarta sano ah, injineerada kumbuyuutarrada iyo kumbuyuutarrada, injineernimada kumbuyuutareedka, injineernimada hababka macluumaadka, injineerinka korontada, injineerinka elektaroonigga ah, injineernimada iyo isgaarsiinta, xisaabta
Qalin jebinta waaxyada injineerinka ama injineerinka softiweer ama machadyada tacliinta sare ee dibeda oo uqalmadooda ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare,
2. Si loo caddeeyo inuu / ay leeyahay ugu yaraan hal sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan maareynta mid ka mid ah Nidaamyada Hawlgalka Linux (illaa taariikhda dalabka),
a. Si aad u hesho aqoon ku saabsan Pardus OS,
b. Si aad u hesho aqoon ku saabsan nidaamyada ku saleysan Debian
c. Aqoonta Adeegyada Maareynta Maareynta Shirkadaha (DNS, DHCP, LDAP),
d. Si aad u hesho aqoon u dhiganta qoraalka (Bash, Python),
e. Inuu aqoon u leeyahay maareynta shabakadda iyo amniga.
1. Qalin jebinta afarta sano ee injineernimada korontada ama waaxyada injineerka korontada korontada ee koleejyada ama machadyada tacliinta sare ee dalka dibadiisa oo uqalmadooda ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare,
2. Jaamacad heer qaran ah oo ku xidhan YÖK; In la qaato ugu yaraan mid ka mid ah koorsooyinka aklama Grounding "," Farsamadii Korantada Weyn "," High Voltage Circuit Breakers Tesis iyo Harmics Harmonics in Installations Vya ama koorsooyinka ay oggolaadeen ama ku dhawaaqeen / aqbaleen YÖK ama jaamacadda ka qalin jabisay,
a. Khibrad ku saabsan korantada / dayactirka korantada oo hooseeya, hagaajinta ama aagagga ay ka shaqeeyaan,
b. Si aad u hesho Shahaadada Aqoonta Khabiirka Amniga Shaqada.
1. Injineerada kombiyuutarka ee afarta sano ah, Computerka iyo Injineerinka, Injineerada Nidaamka Kumbiyuutarka, Injineeriyada Nidaamka Macluumaadka, Injineerka Korontada, Koronto, Injineeriyada iyo Isgaarsiinta, Injineerka Xisaabaadka, Injineerinka Injineeriyada ama Qeybaha Injineerka Warshadaha ee kulliyadaha waxaa aqbalay Golaha Tacliinta Sare. ka qalin-jabiyey machadyada tacliinta sare ee dibedda,
2. Si loo caddeeyo inuu isagu / iyadu leeyahay ugu yaraan hal sano oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan nidaamka maqalka iyo muuqaalka (Shirka Wada-tashiga) (sida taariikhda codsiga),
3. Waxaa doorbidan; wax shahaado ah oo ku saabsan nidaamyada shirarka maqalka, fiidiyowga ama fiidiyowga.
1. Injineerada kombiyuutarka ee afarta sano ah, injineeriyada kumbuyuutarrada kombiyuutarka, injineerinka kombiyuutarka iyo kumbuyuutareedka, injineerinka korontada, elektarooniga iyo injineernimada isgaarsiinta, injineernimada korontada, injineernimada kombiyuutarka
ama waaxyada injineernimada macluumaadka farsamada ama machadyada tacliinta sare ee dalka dibadiisa oo u qalmitaankooda ay aqbaleen Golaha Tacliinta Sare,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 auditors iwm. si loo caddeeyo inay kaqeybgaleen tababbarradii amniga caalamiga ah (oo ay ku jiraan tababbarradii khadka tooska ah),
3. Si loo caddeeyo inuu / inay leeyahay ugu yaraan hal sano oo ah aqoon / waayo-aragnimo (taariikhda codsiga) ugu yaraan mid ka mid ah qaybaha soo socda,
a. Dhexgalka baarista iyo nuglaanta,
b. Software iyo Nidaamka Amniga,
c. Maareynta Diiwaanka,
d. Nidaamyada Maamulka Aqoonsiga,
e. Shabakad aasaasi ah, TCP / IP, macluumaad shabakad, dekedo iyo borotokool,
f. Nidaamyada amniga sida galka, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM iyo PAM,
g. Nidaamyada hawlgalka Windows, Linux iyo Unix,
h. Ciribtirka sirdoonka internetka iyo nuglaanta,
i. Xisaabinta Amniga Shabakadda,
j. Websaydhada websaydhada sida Microsoft IIS, Apache, Tomcat iyo Nginx,
k. Daruuro, Amniga Internetka, Amniga Intranet iyo Wifi Security,
l. Qiimaynta khatarta internetka iyo qiimaynta.
a. Amarka wanaagsan ee Ingiriisiga,
b. Waxay xoojisaa maareynta, aragtida jidheed iyo farsamo ee amniga internetka.
1. Injineerada Warshadaha afarta sano ah, Warshadaha Warshadaha iyo Nidaamka, Injineerinka Kumbiyuutarka, Injineerinka Software, Injineerinka xisaabta, Injineerada kumbuyuutareedka, Injineerada Nidaamka Kumbiyuutarka, Injineerada Nidaamka Macluumaadka, Injineerka Korontada, Injineerka Elektarooniga ah, Cilmiga Injineeriyada iyo Isgaarsiinta, Injineerka Macluumaadka Farsamada, Injineerka Korantada ama Nidaamka Tamarta Tamarta waaxaha injineeriyada ama tacliinta sare ee dibada oo u qalmitaanteeda ay aqbasho Golaha Tacliinta Sare
2. Si loo caddeeyo inay door firfircoon ku leedahay ISO 9001 ama 27001 habraacyada maaraynta maaraynta,
3. Inuu haysto ugu yaraan 1 sano oo khibrad ah xagga nidaamka maaraynta tayada (ilaa taariikhda dalabka),
a. Si aad u hesho aqoon ku saabsan hagaajinta geeddi-socodka ganacsiga iyo maareynta mashaariicda codsiyada ganacsiga,
b. Si aad u hesho aqoon ku saabsan aqoonsiga, falanqaynta iyo qaabaynta hannaanka ganacsiga,
c. In la helo maamul tayo leh iyo heerar tayo leh,
d. Khibrad u leh go'aaminta iyo kala-soocidda baahiyaha ganacsi ee ku saleysan istiraatiijiyadda iyo mashaariicda,
e. Awood u lahaanshaha iyo aqoonta lagu cabiro saameynta hawlgallada ganacsigu ku leeyihiin mashaariicda,
f. Si aad u hesho aqoon ku saabsan ISO 20000 Nidaamka Maareynta Adeegga Tiknolojiyadda Macluumaadka iyo barnaamijyada wareegga nolosha software,
g. Si aad u hesho macluumaad ku saabsan heerarka shahaadooyinka Maareynta Nidaamka Maareynta Tayada,
h. In la haysto aqoonta xisaabaadka gudaha si loo sameeyo xisaab hubin tayo leh.
Qalin-jabinta injineerinka, injineernimada warshadaha, warshadaha iyo nidaamyada injineeriyada ama waaxyada injineerinka softiweer ama machadyada tacliinta sare ee dibedda oo u qalma ay aqbashay Golaha Tacliinta Sare,
2. Si loo caddeeyo inuu / ay leeyahay ugu yaraan 2 sano oo waayo-aragnimo xagga softiweer ah, naqshadaynta softiweer ah iyo horumarin ah (illaa taariikhda codsiga),
3. Si aad u hesho aqoon / khibrad ku saabsan .NET Framework iyo C # programming,
a. Si aad u hesho aqoon ku saabsan ASP.NET WebForms iyo ASP.NET, MVC,
c. Si aad u lahaato heerka aqoonta iyo heerka aasaasiga ah ee aqoonta SQL si loo horumariyo codsiyada leh xogta RDBMS,
d. Si aad u hesho aqoon ku saabsan HTML5, CSS, Bootstrap,
e. Si aad u hesho aqoon ku saabsan WCF, SOAP iyo qaab dhismeedka Adeegga REST Web,
g. SVN, TFS iwm. aqoon u leeyihiin barnaamijyada sameynta.
1) Foom Codsi ANNEX-1,
2) Foomka Xulashada - Lifaaqa-2, (Foomka Xulashada, waa ku qasab in la cadeeyo kooxda la dalbaday, haddii aan la cayimin, arjiga waxaa loo qaddarin doonaa inuu yahay mid aan jirin. In kabadan hal koox ayaa la dooran karaa haddii ay buuxiyeen shuruudaha dalabka. )
3) 2018-Dukumentiga natiijada KPSS,
4) Nuqulka asalka ah ee dukumintiga heerka waxbarasho ama muunad la ansaxiyay oo ay soo bandhigtay hay'adda waxbarashadu, asalka ama muunad la ansaxiyay oo ay soo bandhigtay hay'adda waxbarashadu, haddii shahaadada heerka waxbarasho laga soo qaatay dibada, nuqul dukumintiga ayaa ku filan.
5) Shahaadada iyo dukumiintiyada kale ee muujinaya heerka aqoonta iyo khibradda murashaxiinta,
6) resume sawir qaadid ah, (waxaa diyaarinaya oo saxeexaya qoraalka qoraalka)
7) Shahaadada heerka militariga ee musharraxiinta ragga ah (waxaa laga heli karaa e-Dowladda iyadoo la abuurayo dukumintiga 'barcode'),
8) Foomka Baadhitaanka Amniga ee Annex-3, (Buuxinta foomka Annex-3 iyadoo la raacayo qaybta bILATIL WARNING doldurul), diyaarinta 3 qaybood, oo laga buuxinayo kombiyuutarka, sawirrada lagu dhejinayo, la saxeexida qaybta laxiriirayo oo aan la isticmaalin nooc kale oo aan ahayn foomka ANNEX-3
loo baahan yahay.)
9) Caddayn qoraal ah oo ku saabsan inuusan jirin carqalad caafimaad (lifaaqa-4),
10) Jabinta SSI ama shahaadada adeegga oo muujinaya khibradda xirfadeed ee musharraxiinta. Tallaabo sharci ah ayaa laga qaadi doonaa kuwa soo gudbiya dukumiintiyo aan jirin ama caddayn sameeya. Haddii meelaynta la sameeyo, meelayntooda waa la burin doonaa. Lacag ayaa maamulka laga siiyay
Lacagtaan waxaa laga qaadi doonaa dano sharci ah.
Ka dib markii arjiga arjiga iyo dookha la buuxiyo kombiyuutarka oo gabi ahaanba si sax ah loo saxeexo oo uu codsaduhu saxeexo, dukumiintiyada ku xusan ogeysiiska iyo codsiyada laga bilaabo 27/01/2020 illaa dhamaadka saacadaha shaqada ee 10/02/2020 Wasaaradda Caddaaladda Agaasinka Guud ee Hay'adda Shaqaalaha ee Xarunta Dhexe ee Hay'adda Agaasinka Waaxyaha / Cinwaanka ANKARA waa in lagu sameeyaa shaqsi ahaan ama boostada si loo gaaro Wasaaraddeena waqtiga loo qabtay.
Codsadeyaasha soo gudbiya dukumiinti la waayey taariikhdaas ka dib dib-u-dhigyada boostada iyo sababaha kale iyo kuwa adeegsanaya foom kale ma aqbali doono.
IV- LAGU AQOONSADAY DIIWAANKA DIIWAANKA, Goobta iyo TAARIIKHDA SOO SOCODKA AMA
Kuwa u qalma inay galaan imtixaanka afka iyo goobta iyo taariikhda imtixaanka waxaa lagu shaacin doonaa websaydhkeena Wasaaradda.
Lacagta guud ee lagu sheegay Wareegtada 04 ee Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda ee ku taariikhaysan 07/2019/205248 waa 6.756,12 Liras Turkish. Bixintu waxay noqon kartaa ilaa 1,9 jeer mushaharka guud ee ay xaddiday hay'addu. Kordhinta mushaharka ay sameeyaan waaxda uu u shaqeeyo iyada oo la raacayo sharciga sanadka maaliyadeed ee hadda lagu dari doono mushaharkiisa / mushaharkeeda hadda.
MUHIIM MUHIIM AH:
Macluumaadka iyo wicitaanada loogu yeerayo musharixiinta dhammaan heerarka imtixaankan laga soo bilaabo arjiga ilaa shaqaalaysiinta waxaa lagu soo dhejiyay barta internetka ee Wasaaradda (www.adalet.gov.t waa) iyada oo loo maro xayeysiin. Waxaa loogu dhawaaqay murashaxiinta iyo shacabka.
Wasaaradda Caddaaladda ee Qorshayaasha si loo sameeyo Xabsi Diyaar Gargaar Wagon
81 Wasaaradda Arimaha Gudaha Digniin Ka Bixinta Xadgudubka Joojinta